Fampirantiana zanatany: fomba vaovao hampiroboroboana ny vokatrao | Martech Zone
Doka ara-nofo: fomba vaovao hampiroboroboana ny vokatrao
Alakamisy 15, 2018 Alahady, Novambra 18, 2018 Samantha Gilbert
Raha efa ela ianao no nivarotra ny vokatrao ka tsy dia nisy vokany tsara izany dia angamba fotoana noheverinao teratany dokam-barotra ho vahaolana maharitra amin'ny olanao. Ny dokam-barotra tera-tany dia hanampy anao, indrindra raha ny fanamafisana ny doka media sosialy misy anao ary koa ny fampiasàna ireo mpampiasa kendrena mafy amin'ny atiny. Fa aleo aloha misitrika ny inona ny doka teratany alohan'ny hieritreretantsika azy ny fomba.
Inona ny atao hoe Advertising Native?
Ny famaritana ny dokam-barotra tera-tany fampiasa indrindra dia ny an'ny Content Marketing Institute, izay mamaritra ny dokam-barotra zanatany toy ny:
Ny endrika dokam-barotra karama rehetra izay manome fampahalalana izay kendrena mafy, mahaliana ary ilaina amin'ny mpihaino anao ka tsy mitovy amin'ny atiny tsy doka na tera-tany.
Izy io dia manao dokam-barotra amin'ny fomba tsy hanaovan'ny mpihaino anao vantany vao mandika ny atiny ho doka fa mahita azy ho toy ny atiny mahazatra. Ho fanampin'izay, ny atiny dia efa sady mahasoa no mahaliana ho an'ny mpihaino anao ka toa tsy hanelingelina na hanalabaraka.
Ny doka zanatany dia misy endrika sy habe maro samihafa. Azonao atao ao amin'ny Google amin'ny endrika valin'ny fikarohana karama. Azonao atao ihany koa ny manao izany amin'ny media sosialy amin'ny alàlan'ny lahatsoratra tohana na navoaka tao amin'ny Facebook, fanavaozana notohanan'ny LinkedIn, ary lisitra nampiroborobo tao amin'ny Twitter. Azonao atao ihany koa ny mandefa lahatsoratra amin'ny tranokalan'ny manampahefana ambony toa ny The New York Times, The Huffington Post, BuzzFeed, ary Forbes. Azonao atao koa ny mampiasa motera fanoroana atiny hanaovanao ny doka misy anao. Ireto ny lisitry ny lahatsoratra natolotra avy amin'ny lafivalon'ny internet izay miseho eo ambanin'ny lahatsoratra vakianao amin'ny tranokala sasany.
Ka ahoana no ampifandraisanao amin'ny doka fampielezankevitra anao?
Manana tanjona mazava
Ny dokam-barotra zanatany dia manana tombony betsaka na manao ahoana na manao ahoana endriny. Izy ireo dia afaka manampy anao hanangana fahatsiarovan-tena sy hatoky ny marikao ary koa hanampy anao hahazo mpamandrika bebe kokoa amin'ny atiny. Tombony iray lehibe dia ny tsy tokony hamerenanao ny votoatiny vaovao foana. Azonao atao ny manintona mpihaino vaovao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra efa navoakanao teo aloha. Misy tombony hafa azonao amin'ny doka misy anao, toy ny porofo ara-tsosialy sy SEO mahomby amin'ny marikao. Ny doka teratany dia manangona porofo ara-tsosialy amin'ny endrika tiana sy fanehoan-kevitra, tsy toy ny dokam-barotra mahazatra mahazatra. Rehefa mampiroborobo ny lahatsoratrao amin'ny sehatra media sosialy ianao, dia azonao atao ny manolotra ny hafatrao amin'ny mpihaino lehibe kokoa, midika izany fa mahazo fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny bilaoginao na tranokalanao ianao. Ilaina manokana ny dokam-barotra zanatany raha vao manomboka ianao ary tsy mbola milamina ny SEO anao.
Miaraka amin'ireo karazana porofo ara-tsosialy azonao avy amin'ny doka teratany dia toa azo itokisana kokoa ny hafatrao ary noho izany dia azo inoana fa ho lasa virus. Rehefa maro ny olona mahalala ny marikao, dia afaka mandika amin'ny fahefana avo kokoa ho an'ny marikao amin'ny endrika famantarana sosialy sy rohy izy io, izay afaka manampy ny toerana misy anao ambony.
Amin'ny dokam-barotra zanatany dia azonao atao koa ny mampitombo ny mpihaino anao amin'ny media sosialy. Ny hafatrao tohana ao amin'ny Facebook sy Twitter dia afaka mitondra mpanaraka sy tiana vaovao, na dia mihaona amin'ireo mpijery aza ny atiny.
Kalitao alohan'ny habetsahana
Mba hahazoana tombony betsaka amin'ny doka ratsy nataonao dia tsy maintsy mamorona votoaty manome lanja ny mpamaky anao ianao, mahaliana ary manintona ny saina ihany koa. Erin Schneider, tonian-dahatsoratry ny serivisy fanoratana lahatsoratra an-tserasera mora vidy, hoy izy,
Na inona na inona ataonao dia aza mamorona atiny toa ny fametrahana ny vokatrao. Tsy tian'ny olona ny amidy am-pahibemaso.
Hanombohana azy, alao antoka fa mamoaka ny atiny ao amin'ny doka misy anao ao amin'ny tranonkalanao ianao. Tokony ho azonao antoka ihany koa fa avo ny kalitaon'ny atiny, tafiditra ao ny antso ho amin'ny hetsika, ary kendrena tsara ho an'ny mpihaino mety tsy hahita azy io ho manakorontana loatra.
Mampiasà tsara amin'ny kendrena
Mandehana hatrany ho an'ireo mpampiasa izay efa na ny mpanjifanao na tena mitovy amin'ny mpanjifanao. Tokony hampiasa retargeting ho tombontsoanao ihany koa ianao, handeha ho an'ireo olona efa nitsidika ny tranonkalanao taloha hijerena ireo vokatrao na serivisinao.
Ny doka natokana dia miasa ao amin'ny media sosialy, koa
Araka ny efa noresahintsika tany am-piandohana, ny doka teratany dia tsy mihoatra ny doka fotsiny amin'ny media sosialy. Azonao atao koa ny manoratra lahatsoratra tohana amin'ny tranokala avo lenta toy ny Forbes sy Buzz Feed. Ireo lahatsoratra ireo dia hisarika ny saina amin'ny marikao ary mety hanova ny fomba fijery ratsy momba ny marikao aza.
Miankina amin'ny hamafin'ny teti-bolanao, dia ho hitanao fa ilaina ny tolotra fanolorana atiny. Izy ireo dia afaka mampitombo ny isan'ny fomba fijery azonao amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ao anatin'ny tranokalan'ny mpanonta lehibe kokoa.
Na izany aza no jerenao, ny dokam-barotra zanatany dia tena ilaina tokoa, miaraka amina mpivarotra maro an'isa mampiasa azy io ankehitriny. Fomba tsara hisamborana mpihaino vaovao sy hamoahana ny marikao eo.
Tags: teratany dokam-barotrafampiroboroboana ny vokatrainona ny dokam-barotra zanatany
Samantha R. Gilbert dia niasa tamina mpanao gazety tao amin'ny masoivohom-panontana amin'ny Internet any New York, Etazonia nandritra ny 2 taona. Izy koa dia manam-pahaizana manoratra matihanina amin'ny lohahevitra toy ny bilaogy, zavakanto maoderina ary fanabeazana.
SocialPilot: Fitaovana fitantanana haino aman-jery sosialy ho an'ny ekipa sy masoivoho
Famerenana endrika tranonkala: fomba iray hiteraka fiovam-po bebe kokoa amin'ny tranokala